ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးများကို Yahoo တွင်မည်သို့ရှာရမည်နည်း။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > Yahoo အကြိုက်ဆုံးဘား - ပြtheနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း
Yahoo အကြိုက်ဆုံးဘား - ပြtheနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း
ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးများကို Yahoo တွင်မည်သို့ရှာရမည်နည်း။
'ကိုနှိပ်ပါmark ။'တွင်တည်ရှိသည်သော' ခလုတ်ကိုYahoo! သင့်ဝဘ်ဘရောက်ဇာ၏ Toolbar အပိုင်း။
ဟေး mac lover ဂျွန်နင်ဒီနေ့ငါ macbrowser remover ပြန်ပေးသမားများကို search.yahoo.com ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာပြမယ် Yahoo Redirect ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းကြားရခြင်းသည်လုံးဝတရားဝင်ပြီးအမျိုးမျိုးသော itredirects သည်သင်၏ browser ၏ပင်မစာမျက်နှာဖြစ်သော yahoo redirect virus နှင့်သင်မည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုသိရှိရန်သင်လိုအပ်သမျှကိုပြောပြလိမ့်မည်။
Yahoo Redirect Virus ဆိုတာဘာလဲ။ ပထမအချက်ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏ browser ၏ပင်မစာမျက်နှာနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုညွှန်ပြပေးသော browser ပြန်ပေးသမား၊ Yahoo သည် အကယ်၍ လူသိများသော Yahoo ဖြစ်လျှင် malware ကိုသတိထားမိရန်နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောစာမျက်နှာတစ်ခုအဖြစ်သုံးပါ၊ သို့သော်သင်ရရှိသောအရာသည်သင်၏ပုံမှန် Yahoo ရှာဖွေမှုရလဒ်မဟုတ်ပါ၊ စာမျက်နှာတိုင်းတွင်သင်၏ browsing အတွေ့အကြုံကိုတကယ့်အိပ်မက်ဆိုးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသောကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောကြော်ငြာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သင်၏ Mac ပေါ်သို့ရောက်ပြီလား။ Eare Two Routes Yahoo Redirect သည် Tosneak ကိုကွန်ပျူတာအစုအဝေးတွင်အသုံးပြုသည်။ torew ဒေါင်းလုပ်များကို freeware ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်သည့်အခါအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်အတူပါလာသည့် malware နှင့်သင် download လုပ်လိုသည့် app ကိုပေးလိမ့်မည်။ Malvertising ဆိုသည်မှာကြော်ငြာကိုနှိပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် pop-ups များကိုမှားယွင်းသောပြောဆိုမှုများဖြင့်ဖော်ပြပေးသည်။ ကြော်ငြာကိုနှိပ်ပြီးပါကသင့် Mac ပေါ်တွင် Malware ထည့်သွင်းထားသည်။ သို့သော် Yahoo redirect သည်သင်၏ system ကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်ရေရှည်တွင်အဘယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သေးသနည်း။ Malware သည် system ကိုနှေးကွေးစေပြီး CPU နှင့် RAM အရင်းအမြစ်များစွာကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခိုးယူခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်း၏အန္တရာယ်လည်းရှိနိုင်ပါသလား။ yahoo redirect virus ကို third party ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင်လေပြင်းလေပြင်းနှင့်၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းတင်ပြပေးပါမည်။ မြန်ဆန်စွာအလိုအလျောက်နည်းလမ်းကို ဦး စွာပြပါမည်။ အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည့်နည်းလမ်းမှာ Apple မှအသိအမှတ်ပြုထားသော anti-malware tool ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ Mac xq ကို mac -qq တိကျသောဗိုင်းရပ်စ်များအားလျင်မြန်စွာကုသသည်။ သင်၏ Mac ကို malware ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်အတွက်ကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ အက်ပ်များ။
၎င်းသည်မည်သည့် system လုပ်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖိုင်များကိုမဆိုသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ အောက်ဖော်ပြပါဖော်ပြချက်တွင်ကျွန်ုပ်၏ Mac ကိုအခမဲ့ download link ရယူရန်ကြိုးစားပါ။ သင် cleanmymacx ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပြီးပါက sidebar ရှိ Malware Removal သို့သွားပါ။ Detection process ကိုစတင်ရန် Scan ကိုနှိပ်ပါ။ tool သည်သင်၏ Mac ကို malware အတွက်စစ်ဆေးပြီး၎င်းကိုဖယ်ရှားပြီးသည်နှင့်ရလဒ်များကိုပြလိမ့်မည်။ လူတိုင်းအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုကိုတစ်ကြိမ်တည်းဖယ်ရှားပစ်ရန်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာကစားဘို့ကြီးသော။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ malware မော်နီတာကိုဖွင့်ပါ 'Clean my my x' menu ကိုနှိပ်ပြီး Preferences ကိုရွေးပါ။ ဒေသတွင်းခြိမ်းခြောက်မှုအားလုံးမှကာကွယ်မှုကိုရွေးပါ။ Yahooredirect ကိုကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားလိုလျှင်သင်၏ browser ကို Default Settings သို့ပြန်ပို့သင့်သည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုသုံးပြီး Safari ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနောက် Firefox နဲ့ Chrome မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုပြပါမယ်။ Safari menu ကိုသွားပြီး Settings ကိုရွေးပါ။ ပြီးရင်ပြီးတာနဲ့ Yahoo နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Extensions Look for extensions ကိုရွေးချယ်ပါ။ အထွေထွေ tab သို့သွားပြီးမူလစာမျက်နှာကိုသင်လိုချင်သည့်စာမျက်နှာသို့ပြောင်းပါ။
နောက်ဆုံးတွင် search tab သို့သွားပါ။ သင်အသုံးပြုလိုသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအချက်မှာဂူဂဲလ်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်သံသယဖြစ်ဖွယ် extension များဖယ်ရှားပစ်ရန်အချိန်တန်ပြီ။
Firefox ကိုဒီစာကြောင်းကို address bar မှာပထမဆုံးရိုက်ပြီး Enter field ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဖော်ပြချက်အကွက်မှကူးယူနိုင်ပါတယ်။ သင့်တွင်တစ်ခုရှိပါက၎င်းတွင်မပါရှိသောမည်သည့် extensions များကိုမဆိုရှာပါ။ ၄ င်း၏ဘေးရှိအစက်သုံးခုကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ လိပ်စာ bar တွင် Remove Enter this ကိုနှိပ်ပါ။ ဤ command ကိုဖော်ပြချက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပင်မစာမျက်နှာနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ သင်၏ပင်မစာမျက်နှာကိုပြုလုပ်ရန် Homepage ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ထို့နောက်သင်၏မူလရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုရွေးချယ်ရန်ရှာဖွေမှုသို့သွားနိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာ Chrome ကိုဇောက်ထိုးတင်ခြင်းအတွက်လမ်းညွှန်ပါ။ ရှေ့သို့ slash ရှေ့သို့ slashhextensions သို့ဤ command ကိုဖော်ပြရန် box ထဲမှကူးယူပြီးသင်၏ address bar ထဲသို့ကူးထည့်ပါ။ သင်၏ browser ၏ညာဘက်ထောင့်ရှိ dot icon သုံးခုကိုလည်း နှိပ်၍ ရနိုင်သည်။ Tools များပိုမိုစတင်သည်။ ထို့နောက် Extensions ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ Chrome extensions များစာရင်းသည်သင်တပ်ဆင်လိုသောအရာများအတွက်ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
ဘေးရှိ Remove ကိုနှိပ်ပါ။ Settingbar မှာ settings page ကိုရောက်ဖို့ဒီမျဉ်းကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သင်စိတ်ကြိုက် homepage ကိုသတ်မှတ်ဖို့ sidebar မှာရွေးပါ။ အဲဒီနောက်သင် search engine tab ကိုသွားပြီးသင်သုံးချင်တဲ့ browser ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ အဲဒီအဆင့်တွေအားလုံးပြီးသွားပါပြီ။ Yahooredirect ကို manually browser တစ်ခုစီမှကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားရန်အချိန်မရှိပါက safarifirefox ကို cleanmymac x ဖြင့် reset လုပ်ရန် (သို့) Chrome cleanmymacx ကိုဖွင့်ပြီး sidebar ရှိ uninstaller ကိုရွေးပြီးသင် reset လုပ်ချင်သော browser ကိုရှာနိုင်သည်။ deinstallland ဘေးရှိမြှားများကိုနှိပ်ပါ။ မီနူးမှပြန်လည်စတင်ရန်ရွေးချယ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင် reset ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ browser သည် cleanmymacx အားပေးရမည့် Safari ကို system applications များသို့ ၀ င်ရောက်ရန် cleanmymac x settings သို့သွားပြီးရွေးချယ်ပါ။ In-the deinstallation စာရင်းကိုအခြားဘရောက်ဇာဆိုင်များနှင့်ပြုလုပ်သကဲ့သို့ဤဆောင်းပါးသည်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ လင့်ခ်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ဖော်ပြချက်ကိုကြည့်ပါ
သင်ရွေးလို့ရပါတယ် ၎င်းတို့ကိုဖျက်ရန်သင်ဖျက်လိုသောခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်။ သင်ရွေးရန်ကိုနှိပ်ပါ၊ ထို့နောက်အမည်ကိုတည်းဖြတ်ရန်ထပ်နှိပ်ပါ။
လိပ်စာကိုတည်းဖြတ်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ သင်သည်ဤအမှတ်အသားများကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆွဲခြင်းဖြင့်ပြန်လည်စီစဉ်နိုင်သည်။ Bookmarks bar မှသင်ထပ်တူပြုနိုင်သည်။
သင်၎င်းကို နှိပ်၍ ဆွဲချနိုင်သည်။ သငျသညျအလုံအလောက်ဝေးဆင်းသွားကြလျှင်, သူကဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသိမ်းထားနိုင်ပြီးသင်အမည်ပြောင်းနိုင်သည်။
သူတို့ကိုဘယ် Bookmarks ကို Bookmarks bar မှာပြန်စီစဉ်နိုင်သည်။ trackpad နှစ်ခုကိုလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းသို့မဟုတ် mouse ကိုညာခလုပ် နှိပ်၍ ဤနေရာတွင်သင်ရွေးစရာများကိုရရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လိပ်စာများကိုနာမည်ပြောင်းခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းများရှိသည်။
ဒါဆို Bookmarks bar မှာလိပ်စာကိုဒီမှာတည်းဖြတ်လို့ရပါတယ်။ သင်လိပ်စာကိုကူးယူခြင်း (သို့) ဆက်စပ်မီနူးကို သုံး၍ ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ဒီ tab ကိုလက်ရှိ tab မှာဖွင့်မယ့်အစား tab အသစ်ဒါမှမဟုတ် window အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
ယခု bookmarks bar ၏အလွန်အရေးကြီးသောအပိုင်းမှာသင်၌၎င်းဖိုင်တွဲများထားရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မှာ message folder တစ်ခုနှင့်လူကြိုက်များတဲ့ folder တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာတွေ့နိုင်တယ်။ ဤရွေ့ကားစံအစုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ရင် bookmarks များစွာရှိတဲ့ drop-menu တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ဒီတစ်ခုချင်းစီအတွက် Bookmarks bar မှာနေရာယူမယ့်အစားဖိုင်တွဲသေးသေးလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးသင်သွားချင်တဲ့ link ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင် 'Edit Bookmarks' သို့သွားပါကဤဖိုင်တွဲများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုအရာများကိုအတွင်းမှအရာများကိုရွှေ့ခြင်း၊
Favourites ကိုရွေးပြီး folder အသစ်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ Bookmark ကိုသွား, bookmark folder ကိုထည့်ပါ။ သိုမဟုတ် Control-Click နှင့် New Folder တို့ကိုအသုံးပြုပါ။
ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုလည်းရွေးပြီး New Folder ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် subfolder တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မက်ဆေ့ခ်ျဖိုင်တွဲတွင် local message folder တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည်။
ယခုငါကဒီမှာကလစ်နှိပ်ပါသောအခါငါ၌ငါ subfolder ကိုငါတွေ့နိုင်ပါသည်နှင့်ငါအကြိုက်ဆုံးဘားကနေအလွယ်တကူအလွယ်တကူဖြစ်ကြောင်း bookmarks အဆင့်ဆင့်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင့်တွင်ဖိုင်တွဲတစ်ခုရှိပါကသင်ကလစ် နှိပ်၍ ဖွင့်ပြီး New Tabs တွင်ရွေးနိုင်သည်။ အဲ့ဒီ folder ထဲမှာ bookmark အားလုံးကိုသီးခြား tabs တွေဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်။
ဒီမှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်တစ်ခုပါ။ ခလုတ်ကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး 'Replace tabs automatic' option ကို enable လုပ်နိုင်သည်။ ဒါကမင်းနာမည်ဘေးမှာစတုရန်းလေးတစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်။
သင်နှိပ်သောအခါ၊ ယခု ၀ င်းဒိုးတွင်သင်ဖွင့်ထားသောမည်သည့် tabs များကိုမဆို website တစ်ခုချင်းစီအတွက် tabs များဖြင့်အစားထိုးလိမ့်မည်။ ငါဒီမှာသုံး tabs ဖွင့်လှစ်ဆိုပါစို့။ ငါကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါသောအခါ, ထို tabs သုံးခုလုံးဝဖိုလ်ဒါရှိဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးနှင့်အတူလုံးဝအစားထိုးနေကြသည်။
ဒီဟာကိုကျွန်တော် disable လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်မှာလည်း sort လုပ်ရန် Control-click ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤဖိုဒါထဲတွင်ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုနာမည် (သို့) လိပ်စာဖြင့်စီနိုင်သည်။
ယခုသင် modifier သော့နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများစွာကိုလုပ်နိုင်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာဘားရှိဤလင့်ခ်များနှင့်ဖိုလ်ဒါများနှင့်အထူးပြုသောသော့များအလုပ်လုပ်ပုံသည် Safari ၏အကြိုက်များနှင့်သင် tabs များပေါ်မူတည်သည်။ ဒီတော့ဒီမှာ tab အသစ်တစ်ခုမှာ link တစ်ခုကိုဖွင့်ဖို့ 'Command Click' ကိုထားလိုက်တယ်။
ဒါကြောင့်ငါကဒီမှာကလစ်နှိပ်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်လက်ရှိ tab ကို၌ဤ link ကိုဖွင့်လှစ်။ ဒါပေမယ့်ငါအစား 'Command Click' ကိုနှိပ်လိုက်ရင်၊ အဲဒီမှာသူကကျွန်တော့်ရဲ့ setting နဲ့တူတဲ့ tab အသစ်ထဲမှာဖွင့်နေတယ်ဆိုတာသင်တွေ့နိုင်တယ်။ ငါ Shift ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါ၊ ၎င်းသည် tab အသစ်ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းကိုရှေ့သို့မြင်စေသည်။
Shift key ကိုနှိပ်လျှင် link အသစ်သည် window အသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် Shift Click နှိပ်ကြည့်ပါ။ ဒီ link မှာဒီ link အသစ်ရှိနေပြီ။ ၀ င်းဒိုးအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်ခလုတ်နှိပ်ရုံသာမကဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောစည်းမျဉ်းကိုလည်းလိုက်နာသည်။
ဤကိစ္စတွင် Command Option Click သည် ၀ င်းဒိုးအသစ်တွင်လည်းဖွင့်လိမ့်မည် (သို့) Command Option Shift-Click သည် ၀ င်းဒိုးအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး ၀ င်းဒိုးအသစ်ကိုရှေ့သို့ယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ Command option ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သငျသညျမမွငျ, ဒါပေမယ့်ယခုနောက်ကွယ်မှဒီ link ကိုနှင့်အတူဒုတိယပြတင်းပေါက်ရှိပါတယ်ပထမ ဦး ဆုံး။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Shift command option ကိုဖိထားပြီး၎င်းကိုနှိပ်လျှင်၎င်းသည်ထပ်တူပြုသော်လည်းယခုရှေ့မျက်နှာစာသည်။ ရွေးချယ်မှုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကို download လုပ်ပါလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်သင်က click option ကိုနှိပ်လိုက်ရင်၊ ဒီစာမျက်နှာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် download လုပ်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ဒီမှာ Downloads ထဲမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ အဲဒီမှာတစ်ခုခုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာသဘာဝကျပါတယ်။ သင့်တွင် PDF ပုံစံဖြင့်အလုပ်အစီရင်ခံစာရှိသည်ဆိုပါစို့လင့်ခ်တစ်ခုတည်းအောက်တွင်အမြဲတမ်းတွေ့နိုင်သည်။
၎င်းကိုသင်၏အကြိုက်ဆုံးဘားသို့ထည့်ပြီး option ကိုနှိပ်ပါ။ ဤဖိုင်၏နောက်ဆုံးမူကွဲသည်သင်၏ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွဲတွင်အလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ သင်ဒီမှာပုံမှန်ဖိုင်တွဲတစ်ခုအဖြစ်သင်ထားခဲ့နိုင်သော tabs များအားလုံးကိုအမြဲတမ်းအစားထိုးသောဖိုလ်ဒါတစ်ခုကိုသင်သတ်မှတ်လိုခြင်းမရှိပါကသင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပြီးရင် folder ကို option-click နှိပ်လိုက်ရင် tab အားလုံးကိုအစားထိုးသွားမှာပါ။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကသင်ဒီလိုလုပ်ရင် Back ခလုတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ tabs အားလုံးပြန်ရောက်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဘယ်မှာလဲဆိုတာပြန်သွားပါ
သင်ဖွင့်ထားသောစာမျက်နှာများကိုဖွင့်ထားစဉ်ထိုဝက်ဘ်စာမျက်နှာများအားလုံးကို tab များထဲသို့ပေါင်းထည့်ရန် folder တစ်ခုပေါ်တွင် command ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီမှာမင်းကိုပြချင်တဲ့နောက်ဆုံးအချက်တစ်ချက်။ လူတွေကမကြာခဏသူတို့အကြိုက်ဆုံးဘားမှာဒီမှာဝဘ်ဆိုဒ်အတွက်အိုင်ကွန်နည်းနည်းလိုချင်ကြပါတယ်။
ကောင်းပြီကြောင်းဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းမရှိ။ သို့သော်သင်သည် emojis ထည့်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤစာတွဲဖိုင်ကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ။
ငါကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အမည်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ ငါမက်ဆေ့ခ်ျမတိုင်မီသတင်းစာရုပ်ပြောင်အနည်းငယ်ထည့်ပါလိမ့်မယ်။ Control Command Space သည် Emoji နှင့်အထူးစာလုံးများကြည့်ရှုသူကိုဖွင့်နိုင်သည်။
ငါသတင်းကိုရှာဖွေနေသည်။ သတင်းစာသင်္ကေတများရှိသည်။ ငါဒီတစ်ခုရွေးပါလိမ့်မယ် နေရာလွတ်ထားပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်သတင်းစာသင်္ကေတအနည်းငယ်ရှိသည်။
ဒီ link ကို Apple ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုနာမည်ပြောင်းပြီးအဲဒီမှာပန်းသီးအနည်းငယ်ထည့်မယ်။ ဤသည်မှာသင်၏ Bookmark ဘားသို့အရောင်အချို့ကိုအမှန်ထည့်ရန်သို့မဟုတ်သင်အလိုရှိပါက emojis ကိုသုံးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်စာသားကိုလုံးလုံးယူပြီးထိုဖိုင်တွဲအတွက်အီမိုဂျီသေးသေးလေးသို့မဟုတ်အက်ပ်ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ပန်းသီးတစ်လုံးသာရနိုင်သည်။
သင်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ Safari ရှိအကြိုက်ဆုံးဘားတွင်အင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ ။ Bookmarks bar ကိုသုံးဖို့ tab တွေအများကြီးရှိတဲ့လူတွေကိုငါမကြာခဏပြောတယ်။
သင်၏အဓိကဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးကိုထိုနေရာတွင်ထားပါ။ သင်က tab တစ်ခုကိုအသစ်ဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်လက်ရှိ tab ကိုထိုတွင်ပေါ်လာသော link နှင့်အစားထိုးရန်၎င်းတို့ကိုသာနှိပ်နိုင်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘားတွင်သင် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဤဝဘ်ဆိုက်ကိုဖွင့်ထားရန်မလိုပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘားတွင်သင်တစ်ဒါဇင်ကိုသာကန့်သတ်မည့်အစားဖိုလ်ဒါများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရာနှင့်ချီသောဖိုင်တွဲများနှင့်ဖိုလ်ဒါများကိုသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းဖြင့် စုစည်း၍ ပြန်လည်စီစဉ်နိုင်သည်။
Toolbars'ကိုပြသရန်toolbarsခေါင်းစဉ်ခွဲ။ 'ကိုနှိပ်ပါအကြိုက်ဆုံးများဘား 'option ။ ၎င်းဘေးတွင်အမှတ်အသားကိုပြလိမ့်မည်။ သငျသညျယခုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်အကြိုက်ဆုံးများသင့်ရဲ့ browser ပေါ်တွင်ဘားtoolbar။စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် 2017 ။
အခြား Windows7ဆောင်းပါးတစ်ခုကိုကြိုဆိုပါ။ Internet Explorer အဟောင်း၏ဗားရှင်းမှ Internet Explorer အသစ်သို့ပြောင်းသောအခါလူတို့၏တွေ့ရှိရသောအဓိကပြproblemsနာတစ်ခုမှာ Internet Explorer ၀ င်းဒိုး၏ထိပ်မှကံမကောင်းစွာပေါ်လာသည့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုမည်သို့ရနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် Microsoft Explorer မှ Internet Explorer9မှစတင်၍ မိမိတို့၏အင်တာနက်စာမျက်နှာများအတွက်နေရာလွတ်များပေးရန် toolbars များကိုအနည်းဆုံးလျှော့ချလိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သောပျော်စရာနှင့်ကံဆိုးသောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ အလွန်သေးငယ်တဲ့ display ကိုinရိယာထဲမှာ toolbars ။ ဤပြwithနာ၏အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာဖိုင်များသည်အလွန်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းနှင့်ပြသခြင်းရွေးချယ်စရာများသည်အမှန်တကယ်အရေးအကြီးဆုံးသောဘားများနှင့် toolbars များထဲမှအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ လူများသည်ပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်ပင် pinwheel နည်းနည်းဖြင့်ရွေးချယ်စရာများကိုရှာတွေ့နိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်။ ညာဘက်ထိပ်ရှိredရိယာသည်အနီရောင် x ရနိုင်ပြီးမည်သည့်ကိရိယာများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်အဓိကလိုချင်သည့်အရာနှင့်အလိုရှိရာ maintoolbar ကိုလိုချင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အင်တာနက်စူးစမ်းရှာဖွေသူအား ၉ သို့မဟုတ် ၁၀ အထိအဆင့်မြှင့်ပါကအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ icon မရှိတဲ့ window ရဲ့ထိပ်ကိုသွားပြီး menu bar Favorites bar command command status status bar ကိုညာဖက်နှိပ်ပြီးပယ်ဖျက်လိုက်ပါ။ ဥပမာ menu menu ကိုသင်လိုချင်လျှင်၎င်းကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာသူတို့နောက်ဆုံးမှာမင်းရဲ့ဖိုင်တည်းဖြတ်မှုအကြိုက်ဆုံး tools တွေကိုပြသပြီးကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကငါတို့တကယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောဘားလိုပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံးရှိပြီး၎င်းဟာအရမ်းသေးငယ်တဲ့အတွက်အရမ်းကိုအေးတာပဲ။ အများကြီးအာကာသထငါတကယ် th လူအများအပြားပျောက်ဆုံးသွားပြီးသူတို့၏အကြိုက်များကိုမတွေ့နိုင်တော့ပဲနားလည်။ နားမလည်ခဲ့ကြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ယ်ယူသူအမြောက်အများရှိနေသောကြောင့် Microsoft သည်ဗားရှင်းကိုပြောင်းလဲသည့်အခါ၎င်းကိုထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်တော်တော်များများကအိမ်ငယ်လေး၊ ကြယ်ပွင့်၊ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သောအိုင်ကွန်ငယ်များသည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသည်ကိုမသိကြပါ။ ၎င်းတို့ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်း၊ အကြိုက်ဆုံးများနှင့်ကိရိယာများကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်အမှန်တကယ်သင့်မီနူးဘား၊ သင့်မှာအခြေခံအားဖြင့်သင့်မှာအရာအားလုံးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သင် google toolbar, yahoobar သို့မဟုတ်အခြားအရာများကဲ့သို့သောအပိုဘားများရှိသည့်အခါပျောက်နေသောအရက်ဆိုင်အားလုံးလိုအပ်သည်။ သင်ညာဘက် mouse ကိုနှိပ်ပါကသင်ပြန်သွားလိုသည်မှာသင်၏ဘားအားလုံးသည်မဟုတ် ပြသပါလိမ့်မည်။
သင်ပြုလုပ်ရန်အားလုံးသည်အမှတ်အသားပြုရန်၎င်းကိုနှိပ်ပါ။ Internet Explorer ၀ င်းဒိုး၏ထိပ်တွင်ဘားပြန်ပေါ်လာသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ပြန်လည်ရယူရန်မလွယ်ကူသော်လည်းသင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ သေးငယ်သောအရာဤဆောင်းပါး၌အဘယ်အရာကိုသင်ယခုသင်၏တံခါးကျင်ကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲပြသပြီးပြီဆိုလျှင်၊ သင်မလိုချင်သော toolbars များရှိပါကသင်ဘားတွင်ညာခလုပ် နှိပ်၍ သင်မည်သို့သင်ရမည်ကိုသင်သိသည်။ သူတို့ကိုငါဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ဥပမာ menu ကိုမလိုချင်ပါက၎င်းသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၎င်းနှင့်သင်ကစားနိုင်သည်။ သင်လိုချင်သည့် toolbars ကိုတင်ပြီးသင်လိုချင်သော toolbars များကိုစာရင်းပေါ်တွင်သာနှိပ်ခြင်းအားဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဤအချက်သည် Windows7နှင့် Internet Explorer အကြောင်းပိုမိုနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆောင်းပါးများရှိပါကသင်ကြည့်ချင်သောအရာများရှိသည်။ Windows တွင်ဤလုပ်ဆောင်မှုမရှိပါ။ 'ဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်အွန်လိုင်းစမ်းကြည့်ပါမည်။ သင် Windows7Official Channel သို့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်
yahooလိပ်စာဘားတန်းရှိ .com 'ကိုနှိပ်ပြီး' Enter 'ကိုနှိပ်ပါ။
Install ကိုဖွင့်ရန် 'Download Now' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါYahoo!
Settings စာမျက်နှာ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ Appearance ကိုရွေးချယ်ပါ။ Show Favorites bar ကို tabs အသစ်ပေါ်တွင် Always or Only သို့သာသတ်မှတ်ပါ။ အနှစ်သက်ဆုံးဘားတွင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကိုထည့်ရန်ရှာဖွေမှုဘား၏ညာဘက်အခြမ်းရှိကြယ်ကိုရွေးပါ၊ ထို့နောက်ရွေးချယ်ထားသောစီမံအုပ်ချုပ်မှုကိုရွေးပါ။
Internet Explorer 11 ရှိအကြိုက်ဆုံးဘားဘယ်မှာလဲ။
Setting ကိုနှိပ်ပြီးနောက် Icon ကိုရွေးပါ။ Show အကြိုက်ဆုံးဘားအောက်တွင်၊ toggle ကိုဖွင့်ပါ။ Internet Explorer 11 တွင် Internet Explorer တွင်၊ လိပ်စာဘားအထက်ရှိemptyရိယာအတွင်းရှိနေရာလွတ်များရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆို နှိပ်၍ (သို့မဟုတ်ညာခလုပ်နှိပ်ခြင်း) နှိပ်ခြင်း။
အနှစ်သက်ဆုံးဘားကိုပြရန်ရွေးထားသောဘားအပိုင်းအောက်ရှိ On အနေအထားသို့သွားပါ။ လက်ျာဘက်ရှာဖွေရေးဘားဘေးတွင်ကြယ်သင်္ကေတကိုရှေးခယျြပါနှင့်အနှစ်သက်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာစာရင်းသို့တိုက်ရိုက်သွားရန် keyboard shortcut ကိုအသုံးပြုပါ။ သင်ရွေးလိုသည့်ဘားတွင်သင်ပေါ်လိုသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဆွဲချပါ။
wuaudt.exe မြင့်မားသော CPU
Firefox မှာ Yahoo Toolbar ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။
Firefox ရှိ 'View' menu ကိုနှိပ်ပါ (သို့) Internet Explorer ရှိ 'Tools' menu ကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးနောက် 'Toolbars' & gt; 'Yahoo! အကယ်၍ သင် toolbar သည်သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်အလိုအလျောက်ပေါ်မလာပါက list ထဲတွင် Toolbar 'ဖြစ်သည်။ 'Bookmarks' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး 'Bookmarks ကိုအသုံးပြုရန်ဆိုင်းအင်' ကိုနှိပ်ပါ။